Dhisida Aaladda Gaarka ah ee Saltwater | Kalluunka
Dhisida Aaladda Gaarka ah ee Saltwater
Viviana Saldarriaga | | Aquarium Marine, DIY Aquariums
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, mid ka mid ah su'aalaha waajibka ah ee dadkaas leh nafta aquarist, ayaa ah:sida loo bilaabo aquarium reef? Waxa muhiimka ah lama yaabi doono sida loo bilaabo, maaddaama taasi ay tahay tan ugu yar murugsan, laakiin runtii haddii aad u baahan tahay sabir lagama maarmaan ah si aad u sugi karto inta taangigu qaan gaadhayo. Dad badan oo u dhaqaaqay mashruucan, waxay ku qaadaan khibradaha laga helay balliyada biyaha macaan, waxayna soo bandhigaan kalluun dhowr ah laga bilaabo usbuuca ugu horreeya, taas oo ah qalad ku saabsan arrinta aquarium-ka biyaha. Laakiin ha walwalin, maanta waxaan ku bari doonaa talaabo talaabo ah sida loo sameeyo haanta tafaariiqdaada, fiiro gaar ah u yeelo
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay bilow aquarium-kaaga biyaha cusbada Waa: Silicone aan lahayn fungicide, galaas, acetone, warqad ciid gaar ah oo loogu talagalay muraayadda, iyo ikhtiyaar ahaan haddii aad rabto inaad isticmaasho astaamaha aluminium. Tallaabada koowaad, waxaa muhiim ah inaad go'aamiso nooca muraayadda aad isticmaali doontid, maadaama dhumucda muraayadda ay kuxirantahay dhererka iyo dhererka quraaradda aad dhisayso. Xusuusnow in dhumucdiisuna ay ka sarreyso inta lagu taliyay waxay kaliya ka dhigi doontaa aquarium-ka mid qaali ah, kordhin doona culeyskiisa isla markaana abuuri doonta qallooc indhaha ah. Dhinaca kale, dhumucda hoose waxay kordhin kartaa halista jabka muraayadda.
Ka hor dheji kareemadaWaa muhiim inaad u isticmaasho warqada dhalada ah si aad u xoqdo cidhifyada kristantarrada, qaabkan waxaan uga fogaaneynaa jeexitaannada lumin kara dusha sare. Xusuusnow ka hor intaadan dalbanin silikoonka, waa muhiim inaan ku nadiifino meel kasta oo ka mid ah meelaha lala xiriirayo acetone, anagoo hubinayna inaan si taxaddar leh u qalajinno. Haddii aadan daaqadaha si fiican u nadiifin, waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u dhegsanayn oo aysan si xun u dhegganayn, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad hubiso inaad nadiifiso boorka iyo dufanka maadaama aadan rabin inaad ku aragto gurigaaga 100 litir oo biyo ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium Marine » Dhisida Aaladda Gaarka ah ee Saltwater
hello, waxaan hayaa telescope iyo dorado waxaan u maleynayaa, aquarium-ka 10-litir ah laakiin in ka badan hal sano oo ay wax badan koro, waxaan rabaa inaan ka dhigo massss weyn aniga lafteyda maadaama aan dooneyno inaan badino bilowgii waxay ahaayeen 5 laakiin way dhimanayeen. Waxaan rabaa inaan ogaado waxa aad kugula talinayso, dhirta aan ku dhex ridi karo, meesha aan ku noolahay heerkulku wuxuu u dhacayaa 10 ama 8 digrii, mararka qaar biyuhu waxay dareemaan qabow aad u daran. 15-kii maalmoodba mar ayaan u geeyaa baaldi ay ku jiraan biyo cusub oo ay ku daaweynayaan aquarium-ka maadaama ay wasakh badan tahay. Khudaar ama khudrad noocee ah ayaan ku siin karaa?
maxaa ceeb ah su'aalo badan. Aad baan uga helay boggaaga!
Ku jawaab jaime andres cruz romero
Muhiimadda Baaskiil wadista Aquarium